Uyenza njani into yokuba umfazi onzima awile eluthandweni: ezona zitshixo kunye neengcebiso | Amadoda aQinisekileyo
Uyenza njani into yokuba umfazi onzima athande uthando
IsiJamani sasePortillo | | Isibini kunye nokwabelana ngesondo
Ngaba siye saqaphela umfazi kunzima kakhulu mhlawumbi ngenxa yokungathembani okanye ngenxa yokoyika ukuqala ubudlelwane. Ngokuqinisekileyo sinikezele ngaphezulu kwesihlandlo esinye xa kufikwa kuloyiso kulo mfazi. Kungenxa yokuba asazi indlela yokwenza umfazi onzima ukuba athande. Kukho izitshixo kunye neengcebiso zokuphumeza le njongo.
Ke ngoko, kweli nqaku siza kukuxelela izitshixo zokufunda ngendlela yokwenza umfazi onzima ukuba athande.
1 Kutheni umfazi kunzima?
2 Uyenza njani into yokuba umfazi onzima awile eluthandweni: amaqhosha
2.1 Yiba nguwe
2.2 Uyenza njani into yokuba umfazi onzima athande uthando: zikhathalele
2.3 Ukunyaniseka nentlonipho
3 Iindlela zokufunda ukuba ungamrhola njani umfazi onzima
Kutheni umfazi kunzima?
Ngaphambi kokuba wenze uphando ngesihloko kwaye ufumane izinto ezinomtsalane kwabasetyhini kunye neendlela ezinokukunceda ukunxibelelana nabasetyhini abanzima, kuya kufuneka wazi ukuba kutheni bethathelwa ingqalelo. Ke ngoko, kuya kufuneka uvavanye ukuba lo mntu kuthethwa ngaye "uyadlala" ukwenza izinto nzima okanye akanamdla kuwe. Ukuba imeko yesibini iyenzeka, sukuhlala uzama ukusondela kuye okanye ukumhlukumeza. Ngamana angakugatyi ngqo ngenxa yeentloni okanye ukuhlazeka, kodwa kungcono ungachithi amandla ekumoyiseni okanye emenze azive engonwabanga. Ukuba akaze ayiphendule imiyalezo yakho okanye akabuyi, kwaye ukuba wenza oko ngembeko, ayingomfazi onzima, ngumfazi ongenakwenzeka.
Nangona kunjalo, abafazi abaninzi babonakala bengenamdla kuwe. Benza oku kuba belinganisa ukuba unomdla kangakanani kubo, ukuba bakuthanda kangakanani, okanye ukukwazi kwabo ukoyisa. Kule meko, ukuba ungazama ukuyithambisa intliziyo yakho ukuze iwele phantsi kweenyawo zakho. Emva koko, sixelela indlela yokoyisa umfazi onzima.
Uyenza njani into yokuba umfazi onzima awile eluthandweni: amaqhosha
Olunye lweempawu eziphambili zabafazi abanzima kukuba zibonakala zingenakufikelelwa, kodwa azinjalo. Uninzi lwazo luneentloni kwaye lunokungazithembi okukhulu. Ezi zinto zenza umxholo wokufunda ukuba woo njani umfazi onzima nobunzima ngakumbi. Ke ngoko, siza kubona ukuba zeziphi izitshixo eziphambili zokufunda ngezi zinto:
Akunyanzelekanga ukuba uzithelekise nomnye umntu nangaphantsi ukuba uyazi okanye uyazi ngeqabane lakho langaphambili. Kufuneka uzive ulingana naye ngokuba ungubani kwaye unjani. Kananjalo akufuneki ucinge ukuba yena okanye ex bangaphezulu kuwe kuba enye into ayinanto yakwenza nenye. Ungumntu owahlukileyo kwaye uneempawu zakho ezintle, charisma kunye nezixhobo zokumenza athandane. Ukuba uneentloni ngakumbi, beka ecaleni uvalo kuba akukho nto uzakuphulukana nayo. Okwangoku awunaye kwaye eyona nto unokuyifumana nguhayi. Nangona kunjalo, ukuba ufumana oku, unokuzivumela ukuba uqhubeke kwaye ujonge kwenye eza kubuyiselwa.
Uyenza njani into yokuba umfazi onzima athande uthando: zikhathalele
Kubalulekile ukuzikhathalela wena kunye nomfanekiso wakho. Abafazi njengamadoda acocekileyo okanye abonakala emhle kuwo nawuphi na umhla. Ayisiyonto yokunxiba ezona mpahla zakho zintle okanye iimpahla, kodwa malunga nendalo yokuba nesimbo sakho.
Kwaye enye yezona zinto ziphambili ekuthandeni umfazi onzima kukunyaniseka nentlonipho. Ukunyaniseka kubaluleke kakhulu ukuze umntu lowo amthembe kwaye amncome. Akukho nto ikruqulayo nengathandekiyo kunomntu oxoka ngokuqhubekayo okanye ubume bobuxoki phambi kwabantu. Ngale ndlela, kwakunzima emfazini onesimilo ukuba awe ezinyaweni zakho.
Kwelinye icala sinembeko. Esinye seziseko zalo naluphi na ubudlelwane kunye nomba osisiseko walo naluphi na uloyiso, ngakumbi ukuba ngumfazi onzima. Konwabele ukuncoma okungcolileyo, ukuthanda, okanye izimvo ezingafanelekanga. Kufuneka uyihloniphe, njengoko ufuna yenziwe kuwe. Yintoni egqithisile, sukuya kude uqhayise. Yonke into kufuneka ithethwe kwaye iboniswe ngendlela eyiyo ukuze anikele kancinci kancinci.
Ngokwesiqhelo, akukho nto ayithandayo umntu obhinqileyo ngaphezu komntu owoyisayo akukho lula nayo. Zinike indawo yakho kwaye ungamvumeli ukuba akusebenzise ngokuthanda kwakho. Kunjalo, Kuya kufuneka uyinike ingqwalaselo eyifaneleyo, kodwa ungayenzi ibe lula ngayo. Kwimidlalo yesilingo, ezi ndima zinokuba ngumdla ukuba uyazi ukusebenzisa izixhobo ngokuchanekileyo.
Iindlela zokufunda ukuba ungamrhola njani umfazi onzima
Masibone ukuba zeziphi izitshixo zokufunda ngendlela yokwenza umfazi onzima ukuba athande:
Musa ukuphelelwa lithemba: Isitshixo sokuphumelela umfazi onzima ngakumbi ayizukubonakala ityhafile. Ukuba uqaphela ukuba unomdla wokuyifumana, uza kuphuma kwishishini kudala.
Mthetho ngokuzolileyo: Kufuneka ugcine i-inshurensi iqinisekile ngalo lonke ixesha. Incinci abayifunayo okanye umfazi ecaleni kwabo ngumntu ongalawulekiyo oza kwenza nantoni na ayifunayo. Ukuba uyinika amandla ngakumbi yenza ukuba ingafikeleleki ngakumbi. Kufuneka ube nokuzithemba nokuzithemba. Wenza ngokuzolileyo nangokuthula.
Musa ukusabela kwingqumbo yabo: ukuba yeyiphi elula kwaye unikezela kwizicelo zakhe ngokukhawuleza, ngekhe umoyise. Baninzi abantu basetyhini abavavanya amanye amadoda ukubona ukuba basabela njani kwaye babone ukuba zingakanani iinzame abanokubaleka ukuzenzela zona. Nika ingqalelo ngakumbi okanye ulwimi lomzimba kunye nolwakho kwaye uzolile. Zama ukubonisa ukungafikeleleki kwayo.
Linganisa isixa sika "hayi" osisebenzisayo: abasetyhini baya kuhlala bekuvavanya. Ukuba uhlala ephendula ngokungalunganga okanye ngokungalunganga, kusenokwenzeka ukuba akafuni kwazi kwanto ngawe. Nangona kunjalo, unganikezeli ngomzuzu wokuqala. Ukuba ibonisa ukuba ubuncinci bokubakho, zama ukwazi ubudlelwane obunzulu kwaye ufune unxibelelwano nalo. Oku kwaziwa ngegama lokungena kumdlalo wokukhohlisa.
Ukuba wenza into engaqhelekanga, sukulahla umsindo: Ngomnye wemidlalo yokulukuhla. Iyakwazi ukusuka ekubandeni ukuya kuthando ngemizuzwana embalwa. Olu luvavanyo nje ukuze ajonge indlela abasabela ngayo. Yenza okuqhelekileyo kwaye uza kubona ukuba ibuyisela njani ubume bayo bendalo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nokwenza umfazi onzima ukuba athande kwaye zeziphi izitshixo zokwenza njalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Isibini kunye nokwabelana ngesondo » Uyenza njani into yokuba umfazi onzima athande uthando
Uyifumana njani intshebe epheleleyo
Iiglasi zokumiselwa kwamadoda, ezibeka iindlela